असारे विकास, देशले पाउला निकाश ? – Gulminews
Home/बिचार/असारे विकास, देशले पाउला निकाश ?
असारे विकास, देशले पाउला निकाश ?
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७५ असार १०, आईतवार ०५:०४ मा प्रकाशित
लामो तथा छोटो दुरीको यात्रा गर्दा यात्रा अवधिमा देखिने घटनाहरूले अचेल मनमा एउटै कुरा खड्किरहन्छ। बषौँसम्म नसकिएका विकास निर्माणका काममा सरकारले सदैब किन आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट छुट्याउँछ ? किन सदैव चौतर्फी बिरोधका आवाजहरू उठ्दा पनि कहिल्यै सरकार जवाफदेही हुँदैन ।
बालुवामा पानी खनाए जसरी अर्बौँ रकम एउटै नतिजा र परिणामका खातिर सदैब खर्च गरिएको छ । दिगो तथा गुणस्तरीय बिकास निर्माणका काममा सरकार दत्तचित्त भएर लाग्ने कहिले ? ठेकेदार कम्पनी पाल्ने र उनीहरूकै रोजिरोटी मात्रै बचाउने हो या जनताले चाहेको दिगो बिकास र आमूल परिवर्तनमा पनि बजेट खर्च गर्ने ।
फ्रिज हुनै लागेको २ अर्ब रूपैँया सरकारले असार मशान्तभित्रै सक्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढेको छ। बिकास निर्माणका अपूरा अधुरा कामहरूमा हात हालेको छ । भर्खर नयाँ सडक खनिदै छन् त कनै झरी झरीमा कालोपत्रे (पिच) गर्ने काम चलिरहेछ गाँउ शहरका तिनै मुख्य तथा सहायक र नयाँ सडकहरूमा वर्षमा छिटफुट देख्न पाईने डोजर र स्काभेटर जेठ पश्चात बाक्लै प्रयोग भएको देख्न अनि सुन्न पाईन्छ ।
जेठ-असार देखि नै मनसुन सक्रिय भैसक्दा पनि मौसम परिवर्तनको गतिसँगै विकासले पनि फड्को मारेको अवस्था छ। प्रचण्ड गर्मीमा होस या झमझम झरी परेको बेला होस् चोक चौकाहरू र गाँउ घरका सडकहरू निर्माण गर्ने, मर्मत गर्नेदेखि कालोपत्रे गर्ने लगायतका काम धमाधम चलिरहेका छन्। न त चर्को घामले पोल्छ न त निथ्रुक्क भिज्ने झरीले नै सडकमा बालकदेखि बृद्धसम्मका व्यक्तिहरूको निर्माणका कामहरूमा बाक्लै उपस्थिति देखिन्छ।
दशकौँदेखि यही परम्परा बसेकाे छ । बिगतका वर्षहरूमा पनि बिरोध नगरिएका होईनन् । आवाज नउठेका होईनन् केही समय समाचार बन्छ समय घर्किँदै गएपश्चात ती समाचार ओझेल पर्छन्।
दशकौँदेखि चलिआएको यो विकासको गति कतिन्जेलसम्म यसरी नै चल्ने हो न त कुनै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छ, न त कुनै आंकलन गर्न नै। वर्षौँसम्म सम्पन्न गर्न नसकेका निर्माणका कामहरू जेठ पश्चात हतार हतारैमा सम्पन्न गरिन्छ । राजनीतिक प्रतिसोध र पहुँचवालहरूकै भरमा यहाँ विकासका नाममा चरम लापर्वाही भैरहेको अवस्था छ ।
गुणस्तरहीन सामाग्री अनि हतारमा गरिने निर्माणका कामहरूले दिगो रूपमा विकासलाई स्थायित्व दिन सकेको अवस्था छैन। वर्ष दिनसम्म काम नगरी बस्ने र आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हतारमै बजेट सक्ने नियतवश दशकौँदेखि यही परम्परा बसेकाे छ । बिगतका वर्षहरूमा पनि बिरोध नगरिएका होईनन् । आवाज नउठेका होईनन् केही समय समाचार बन्छ समय घर्किँदै गएपश्चात ती समाचार ओझेल पर्छन्।
न सरकारले सुन्यो, त अनुगमनले नै । सरकारलाई बजेट फ्रीज हुनुभन्दा ढुलेमुले विकास गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने र ठेकेदारहरूको प्यारो भईदिए भयो । यहाँ त्यही बिकास कति अपरिहार्य छ भन्ने लेखाजोखा गर्ने निकाय कहाँ छ ? कामको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन गर्दे समयमै काम गर्न र सम्पन्न गर्न सरकारले किन जवाफदेही भूमिका निभाउन सक्दैन ?
सदैब यसरी नै स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरबाटै आवाज उठाउँदा पनि असारे विकासको यो परिणती सदैब दोहोरियो। न सरकारले सुन्यो, त अनुगमनले नै । सरकारलाई बजेट फ्रीज हुनुभन्दा ढुलेमुले विकास गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने र ठेकेदारहरूको प्यारो भईदिए भयो । यहाँ त्यही बिकास कति अपरिहार्य छ भन्ने लेखाजोखा गर्ने निकाय कहाँ छ ? कामको मूल्याङ्कन तथा अनुगमन गर्दे समयमै काम गर्न र सम्पन्न गर्न सरकारले किन जवाफदेही भूमिका निभाउन सक्दैन ? अलपत्रै काम छाडेर ठेकेदार कम्पनी कैयौँ समयदेखि सम्पर्क बिहीन छन् भने कतै म्याद लम्ब्याउँदै बजेट सकाउन पल्केकाहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने कस्ले ? कामको शिलशिलामा हुने लापरबाही, ढिलासुस्ती, अनियमितता र कमजोरीका बारेमा बोल्ने अधिकार न हामीलाई छ न त स्थानीय तहबाटै खोजी गरिन्छ नै ।
सरकार सधै यसरी नै असारमै बजेट सकाउने ध्याउन्नमा लागेर अर्बौँ बजेट सकाउनु भन्दा समयमै काम संचालन, अनुगमन, तथा सम्पन्न गर्ने कार्यमा कटिबद्ध भएर लाग्नु जरूरी छ।
गैँडाकोट न.पा २ नवलपुर